Doodisho "Waxaan qabanay 27 qof oo dumar u badan" | Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Doodisho "Waxaan qabanay 27 qof oo dumar u badan"
Doodisho “Waxaan qabanay 27 qof oo dumar u badan”
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Sadiiq Aadan Cali (Doodisho) ayaa ka hadlay hawlgal ay Ciidamada Booliska ku soo qabteen shakhsiyaad uu sheegay inay sifo sharci darro ah ku dhoofinayeen dhalinyaro Soomaaliyeed.
Afhayeenka oo shir jaraa’id ku qabtay Xarunta Hay’adda Dembi Baarista CID ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hawlgalkan lagu soo qabtay 27 qof oo dumar u badan iyo laba nin, uu sheegay inay ku howlanaayeen dhoofinta dadkaasi.
“Maalintii ay taariikhdu ahayd 8-dii bishii June 2021 ayaa Hoggaanka Baarista Dembiyada ee CID-da ee Ciidanka Booliska Soomaaliyeed uu gacanta ku soo dhigay 27 qof, oo dhamamantood ahaa muwaadiniin Soomaaliyeed. Dadkaas ayaa isugu jiray 22 qof oo dumar ah, weliba dhalinyaro u badan, 3 qof oo rag ah iyo 2 qof howlwadeeno ah, isla-markaana doonayay in dadkaas ay u dhoofiyaan dalka dibadiisa sifo sharci darro ah, oo illaa iyo hadda aan la ogayn sababta ay ula jeedeen in dadkaas ay dhoofiyaan.” Ayuu yiri Afhayeenku.
Waxa kaloo uu sheegay in dadkaasi loo dhoofinayay dalka dibadiisa, xilli sida uu sheegay aanay waxba kala socon halkii loo waday, qaarkoodna aanay waalidiintoodu kaba war hayn in ubadkooda la dhoofinayo.
“Dhammaan dadkaas ee ahaa muwaadiniinta dhalinta Soomaaliyeed waxaa loo waday dalka dibadiisa, iyadoo aysan iyaga ruuxooda wax feker ah ka haysanin meesha ay u socdaan, aysana jirin cid la ogeyd, marka laga reebo dadkii waday, qaarkoodna xitaa waalidiintoodu aysan ogayn, isla-markaana ay u ahaayeen awlaad wax u barata, oo u diiwaangishan muwaadiniin caadi ah.” Ayuu yiri Doodisho.
Doodisho oo la dardaarmayay waalidiinta Soomaaliyeed ayaa yiri “Waxaan u baanahay ummadda Soomaaliyeed inay farriintan qaataan, ayna ku baraarugsanaadaan, oo ay diyaar u ahaadaan lana socdaan, gaar ahaan waalidiinta Soomaaliyeed inay ka war hayaan carruurtooda halka loo wado, sida ay u socdaan, la saaxiibaan, la dhaqmaan, ogaadaana dhaqdhaqaaqa iyo habdhaqanka carruurtooda ay ku socdaan, maxaa yeelay dhammaan kiisaska isku socodka dadka la xiriira ee Hoggaanka Baarista Dembiyada ee CID-du gacanta ku dhigay waxaa daba socdo waalidiin aan wax war iyo wacaal ah carruurtooda u haynin meesha ay u socdaan, meeshii ay ka yimaadeen iyo wixii ay damacsanaayeenba.”
Previous articleGabar Soomaaliyeed oo lagu dilay Mombasa iyo hal qof oo dilkeeda loo qabtay
Next articleWasiir Duraan “Qaadku qayb kama ahan duulimaadyada Somaliya iyo Kenya”